NANTSI INDLELA YOKWENZA IMASKI YOBUSO, AKUKHO MTHUNGO UYIMFUNEKO - INTSHOLONGWANE YE-CORONA
Bridget Jones Sana
Ibhola Yedragoni Z
Ukulandela ingcebiso ye-CDC ehlaziyiweyo yokugubungela ubuso kwiveki ephelileyo, bekukho ukwanda kwemveliso yemaski eyenziwe ekhaya. Ukondla kwam i-Instagram kuphela kuye kwaba ngumjelo wee-selfie zobugcisa. Kodwa kuya kufuneka wenze ntoni ukuba awukwazi ukuthunga konke konke, okanye uswele izinto apho ukhoyo?
Ekuqaleni, malunga nesindululo seCDC. Kuba izifundo ezitsha zibonisa ukuba i-coronavirus inokusasazwa ngabantu abangabonakalisi mandla kwaye abanyanzelekanga- oko kuthetha ukuba ungayisasaza intsholongwane kwabanye kodwa uzive ulungile ngelo xesha-iimaski zelaphu le-DIY kunye nokugqunywa kobuso ngoku kuyacetyiswa ukuba kunxitywe wonke umntu. (i-n95 kunye neemaski zotyando zisafuneka kakubi kubasebenzi bezonyango.)
Ukugquma kubaluleke ngokuphindwe kabini kwiindawo zokuhlala ezinje ngeSixeko saseNew York: I-CDC icebisa ukuba unxibe isigqubuthelo sobuso kumalungiselelo oluntu apho amanye amanyathelo okwahlula izinto ekuhlaleni kunzima ukuwagcina (umzekelo, iivenkile zokutya kunye neevenkile) ikakhulu kwiindawo zothumelo olusisiseko loluntu. La manyathelo enzelwe ukuzikhusela kwintsholongwane kunye nokukhusela abanye ukuba ungosulelwa nguwe.
Kuba imask yobuso ehambelana ngokusondeleyo kusithiwa inika ukhuseleko olungcono kunesikhafu, ndonwabile ukubona isifundo esilula nesisebenzayo apho kungafunekiyo ukuthunga kuTwitter. Lo usebenzisa i-bandana, kodwa ukuba akwenzeki ukuba ube ne-bandana elele ngapha nangapha, ungasika ilaphu elithile kubungakanani be-bandana ukuze ulandele indlela efanayo apha. Kungumbono ongcono ukusebenzisa enye ilaphu nakanjani-amalaphu atyebileyo anemisonto ephezulu yokubala angcono (ngakumbi kule ngomzuzu).
imilenze ukusuka apha ukuya kwilizwe lasekhaya "
Inkqubo ye- ubungakanani bobukhulu bebhendi ngee-intshi zilandelayo: 27 × 27 (ngaphezulu), 22 × 22 (umgangatho), 18 × 18 (ubungakanani bomntwana), 14 × 14 (ubungakanani behankie). Ukuba usika kubungakanani obuqhelekileyo be-bandana, ufuna ukuba imilinganiselo ibe ziisentimitha ezingama-22 isikwere, okanye i-56cm x 56cm. Le vidiyo ivela kwiakhawunti ye-Instagram julie_ umnini :
AKUKHO MASKI! & # x1f637; & # x1f497; & # x1f637; & # x1f497; Nceda wabelane nabahlobo bakho! pic.twitter.com/ThUh1lKfNt
-Constance Jones (@ Constance8News) Nge-3 ka-Epreli 2020
I-Bandanas, ngelixa ithandwa kwaye isetyenziswa kwizifundo ezininzi, eneneni ayizizo ezona zinto zibalaseleyo zemaski yobuso. Ke gcina oko engqondweni ngale khokelo ithile-amanye amalaphu asikwe kubungakanani be-bandana angasebenzisa le ndlela, engafunekiyo ukuthunga. Uya kudinga iqhina leenwele ezimbalwa okanye ezinye iziporo zelastiki. Nokuba mna, umntu onobuqili kakhulu, ndiziva ngathi ndingasusa lo msongo ungummangaliso.
Ukusuka Inqaku likaYahoo Ezi zinto zoBuso beMaski yeZinto eziPhambili zezona ziPhambili, ngokweNzululwazi, sifunda ukuba izinto ezithile zingcono kwimaski yobuso eyenziwe ekhaya kunezinye. Eyona nto uyisebenzisayo iya kuba yicotton quilters enokubala umsonto ubuncinci be-180, iiflannel, okanye amalaphu aphezulu okubala intambo onokuthi uwafumane kumaphepha enziwe kakuhle; bacebisa i-pillowcase engama-600 ukuba uyiqhekeze, engabizi kakhulu uku-oda kwi-intanethi ukuba uyayifuna. Isikipa somqhaphu siyasebenza ukuba ukhetho lilinganiselwe.
Ngelaphu, ufuna ukuba i-weave ibe yomelele kangangoko ukuthintela amasuntswana ukuba angene kwaye aphume. Kwipinki, bamba imaski ukuya ekukhanyeni: Ukuba ukukhanya kudlula ngokulula kwimicu kwaye ungabona phantse imicu, ayisiyonto ilungileyo. Ukuba yinto ejiyileyo eshinyeneyo yezixhobo ezityebileyo kunye nokukhanya akudluli kuyo kangako, leyo yinto ofuna ukuyisebenzisa.
Imiyalelo emininzi yemaski yasekhaya ikwacebisa ukuba ucofe isihluzi sekhofi ngasemva kwendwangu okanye usonge ngaphakathi kuyo. Ezi zinokutshintshwa ngokulula xa imaski ihlanjwa kwaye zongeza omnye umaleko wokhuseleko. Ukubonakala ngokulula kwindlela yokwenza oku, jonga esi sikhokelo sinyathelo-nge-nyathelo isikhokelo semifanekiso kwi-CNN, okanye landela uluhlu lweeCDC zemiyalelo kukhetho kunye nokuthunga ukhetho.
Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ngelixa iimaski zelaphu ezenziwe ekhaya zicetyiswa ngamandla ukuba kuya kufuneka uphume uye ngaphandle kwishishini elibalulekileyo okanye umthambo ojolise ekuhlaleni, akufuneki unike abantu umbono wokhuseleko lobuxoki. Olona khuselo lubalaseleyo esinokuba nalo kunye neyona ndlela ilungileyo yokufaka isandla kule ngxaki njengabahlali abaqhelekileyo kukuhlala ngaphakathi kangangoko sinako kwaye siyeke ukusasazeka kwe-COVID-19.
Lana del rey indlala imidlalo
Ngaba ubusenza iimaski? Ngaba unazo naziphi na iingcebiso okanye amaqhinga okanye izifundo ozilandelayo? Sazise kumagqabantshintshi.
(imifanekiso: Wikimedia Commons, CDC)
2021 Unyulo Losodolophu Omtsha Waseyork
Iintsuku Ezingama-500 Zehlobo
Ngubani igama lesigebenga lika-dr frankenstein
spiderman kwisuti yesigcawu
Umlo wokuqala wabasetyhini kwi-ufc
Ngaba ixilongo lelona mongameli uthiyiweyo
bucky oovimba x natasha romanoff
I-avatar ulwabiwo lwenkcubeko lokugqibela lomoya